KAIST - Cinema pamusoro University of South Korea
guta : Daejeon
inotangwa : 1971
Musakanganwa kuti kurukura KAIST
Kunyoresa pa KAIST
unokudzwa Guests, Chairman Myung Oh; Vehomwe Gil-Saeng Chung uye Sam-Soo Pyo; Vaimbove Tourism Nokukurumidza-Dal Choi uye Chang-Sun Hong; aimbova nhengo National Assembly, Mr. Yong-Kyung Lee; Chairman Vakafa-Im Kang of Association vakuru S&T Masangano kwayo nhengo mapurezidhendi – Mutungamiri Young-Myung Choi of Korea Institute of Nonproliferation Nuclear uye Control, Mutungamiri Young-naJohwani Kim pamusoro Gwangju Institute of Science and Technology; uye Ms. Soo-Young Lee, sachigaro KAIST Development Foundation, asinganzwi tsitsi yake simba rokushandira KAIST pamwe Mr. Eung-Sun Lee, ari Vice Chair reNheyo, Mutevedzeri wemutungamiri Hang-Ku Chung pamusoro KAIST School Kutsigira Association, President KWI-Roh Lee National Nano azoshandiswa Center, President doo-Chul Kim of Korea Institute of Advanced Sciences, Purofesa Jang-Hyuk Kwon, mukuru wechikoro Korea Science Academy, anokudzwa fakaroti uye mudonzvo, kirasi 2017, vadzidzi kudzoka, alumni, vabereki, hama dzangu neshamwari, uye pashure mudzimai wangu Myoung A (dzangu) Kang, Ndinokutendai zvikuru nomwoyo wose nokuti pano pakutanga rechi15 KAIST utungamiriri.
Nokuti ini kuti amire pano nhasi yakatsarukanainokosha hunogutsa uye Anomutsa ndangariro zhinji kubva kare. Makore Chaizvoizvo makumi mashanu apfuura, muna January 1963, Ndakanga kunodzidziswa zvechiuto idzva enlistee pakati kirasi yechi111 yakapedza (111 varume) of Korean Air Force muno Yuseong. Ndakapedza mwedzi miviri ipapo dzidzo zvechiuto, uye 9 mwedzi nokuti michina chokurovedza zvemagetsi kukurukurirana midziyo basa. Mwedzi waJanuary akanga zvakaomarara chando ane tembiricha pamusoro -20 Celsius - kwaitonhora chaizvo chokwadi chokuti Korean Bay yakanga chando. Muna November ndakanga ipapo hwakatamisirwa Air Force Base Kangneung, Kangwon-Do. Ndinoyeuka kuti sezvo ndakanga vakamirira Osan kuti ndege kuna Kangneung, Ndakanzwa inosuwisa kuti President John F. Kennedy akapfurwa rufu Dallas, Texas, yaiva zvikuru zvinotyisa.
mu 2002, Ndaiva aishanya purofesa KAIST uye munguva zhizha ndakava nomufaro uchiona Korean National chenhabvu zvinobva shure kuti kubata chikwata simba Italian 2:1. Nanhasi, Ndinorangarira zvakajeka maviri zvinangwa kunoshamisa scored nokuda chikwata Korean, uye pfungwa kudada nenyika uye netariro.
nhasi, Ini kudzokera Yuseong kuti vashumire itsva KAIST mutungamiri. Iropafadzo huru, asi basa kutakura mberi ane National kukosha uye akaoma munzira dzakawanda.
KAIST yakatangwa 1971 ayo dzakavamba zvinangwa, yakanyorwa KAIST mubumbiro nyaya 1, chekutanga, kudzidzisa uye vokurera pamusoro pokubhururuka masayendisiti yemberi vakapakata zvakaoma dzinokosha dzidziso uye kugona dzinobatsira mafomu; chepiri, kuti aite zvose refu uye kwenguva pfupi chikuru uye vakashandisa kutsvakurudza kuti inogonesa wakazovapo rwokugadzira mberi dzorudzi rwacho; uye chechitatu, kupa pakutsvakurudza collaborations ane dzakasiyana dziva kutsvakurudza nemasangano uye indasitiri
Under mureza akadaro KAIST kwakatungamirira kukura zvesainzi maindasitiri muKorea nokuda kare 40 makore kubva kwayo pakagadzwa uye, rava kuzivikanwa munyika yose nevamwe tsvakurudzo yunivhesiti, nemhaka kunoshamisa fakaroti uye mudonzvo yakatsaurirwa kuna pakutsvakurudza zvakaisvonaka uye dzidzo vatungamiriri vedu ramangwana. kuonga kwakadzama ndiko kukonzerwa dzangu vamutangira, Dr. Nam Pyo Suh nevamwe vaimbova vakuru vavo chikwata nhengo administrative, vanenge nomumishinari pavo.
nhasi, vazhinji KAIST vakapedza kudzidza kuita chinozikamwa mipiro sezvo aikudzwa mapurofesa nedzidzo yepamusorosoro uye kupayona vatsvakurudzi muminda sayenzi mapurani.
Just vhiki kare, mudzimai wangu neni takakokwa kune KAIST alumni womuchato panguva International Solid-State nematunhu Conference (ISSCC) muSan Francisco, iyo wakapindwa zhinji KAIST alumni, ano vadzidzi vavo mapurofesa, uye vaenzi. Ndakadzidza kuti gore rino zvekare, KAIST nechipiriso zvikuru mapepa pana ISSCC apo mureza bhaa kugamuchirwa zvakakwirira chaizvo. Uyu unongova zvakawanda chinoratidza chimwe sei KAIST achitsvaka dzokumusoro itsva. The KAIST fakaroti uye vadzidzi zvakabudisa mapepa akawanda akasiyana-siyana munyika yose-anoremekedzwa endangariro akadai Nature uye Science.
KAIST anofanira kuramba kupfuura izvi kutanga isusu, uye KAIST anofanira kuva injini simba nokuda zvoupfumi uye maindasitiri mberi Korea. Serudzi kushayikwa yakadzika padziva zviwanikwa, Korea anofanira kuwana nzira itsva nzira kukwikwidzana munyika yose inonzi kubudirira uye zvakanaka vanhu vayo. KAIST anofanira kuita kwazviri kutungamirira rudzi kurutivi dzaiperera zvesainzi nokushingaira uye basa.
Mumazuva anouya, KAIST vanofanira kukura kuva muchero muti guru mumunda kutsvakurudza uye dzidzo, aivimbwa uye airemekedzwa kwete Korea, asi munyika yose. Kutanga kubva muKorea, Midzi yawo vanofanira kureba kupfuura miganhu yenyika, kuyambukira munyanza shanu kumakondinendi zhinji kuzochera vari vapfumi uye vakasiyana-siyana akagadzirwa nyika-kirasi pfungwa uye zvakagadzirwa kubereka zvibereko zvayo - wakanyatsogadzirirwa kudzidza vachanunurwa vairemekedza vatungamiri uye mari vanhu.
A dzidzo munyika yose-kwakabatana kunokosha munguva ino kuwedzera wezvokutengeserana azvipiwa yemhando Indaneti, supersonic avhiyesheni, uye supersize ngarava. KAIST kudzidza inofanira kukosheswa sezvo innovators pamwe zvakadzama ruzivo, okugadzira zvinhu, kugona nokuti simba Kushandirapamwe uye yakajeka kutaurirana tichitsetsenura mumitauro. Uye chero vanoenda, vanogona kuramba kuparadzira tsika dzavo, tsika, unyanzvi uye ruzivo, uye kubva kuti tinogona zvose murinde sezvo KAIST miti kutumbuka pose.
Pakupedzisira chinangwa sayenzi, Michina zvakanaka uye iri zvakanaka munzanga yedu. Uye ichi zvakanaka zvinofanira yakasimbiswa mu Africa sezvo dzimba kudzidza, yakavakidzana nharaunda, rudzi uye nyika.
In yayo Kuedza kuwana ichi zvakanaka pamusoro kwenzanga, KAIST atambura kukura marwadzo pakati ikure zvinoshamisa. Tinofanira kuderedza marwadzo kuburikidza kuvimbana uye nehanya nomumwe nomumwe, uye kubatana zviri kubatana kutora matanho kurutivi chichiwedzera mangwana pamusoro KAIST. Ini nokuzvininipisa kubatsirwa kwako, uye rubatso kuti akatambanudza yangu napo nesimba somuranda mutungamiri.
Ungave uchiziva firimu rinonzi "The Mission". In firimu iri, ari vanoda mari uye muranda muzvinashawo reDare Robert De Niro chinofamba kubva upenyu rakabvongodzwa kutevedzera kuzvininipisa mupristi wechechi yeRoma uye kutanga ake upenyu patsva. Mune imwe Chiitiko, De Niro mupristi vari achikwira a mawere mapopoma pamawere. Vakati vapedza yakaomesesa kwira, akatakura naye rinorema kwazvo mutoro kwenhumbi sechinhu sakaremende zvivi zvake, vakanga vakwazisa neboka chizvarwa maIndia, akaparadza mukwende uye rakadonha pamusoro kuruware. Kunyange zvazvo asina kugara nyore pamwe De Niro kuti vakafirwa ake kamwe aikoshesa zvinhu, mutoro ikasimudzwa kubva vose, uye upenyu hwavo vakaramba mberi.
Kuti uvhure chitsauko itsva, KAIST anofanira kushanda nesimba ushingi hwakadaro. Pane nharo uye kupa vanhu zvikanganiso zvakaitika kare, KAIST anofanira pamwe kufunga yaro yemberi uye kuita zvayo zvose aite zvinokosha mabasa mberi. Uye tinofanira kubatsira mumwe kusunungura kubva kubata kwedu zvinhu zvichaita kuti rwendo kwedu basa murky uye buda zvakaoma. Ini nomudzimai wangu tiri pano kushanda nemi kuti rivake KAIST nokuda rudzi mai vedu.
Mushakabvu aiva mutungamiriri zvomudzimu Mahatma Gandhi akanyevera zvikuru zvivi nomwe. Pakati pavo zvikuru kuhupenyu KAIST vari 'sayenzi pasina hana,'' Zivo pasina hunhu,'Zvematongerwo enyika pasina musimboti,'Uye' chitendero pasina chibayiro. 'Tinofanira kuedza kusimudzira sayenzi, ruzivo, uye hunhu nehana yakachena, kurerutsa misimboti uye chido chibayiro.
KAIST, kuti uve mutungamiri uye pave nesayenzi, zvemichina uye mumaindasitiri kukura, vanofanira kuita zvakanaka zvinotevera shanu - akasimbisa nerimwe vachishandisa mavara mashanu muzita redu inisitichusheni raMwari.
Chekutanga, "K" riri zivo zvisikwa. Fakaroti nhengo uye vadzidzi arege kupinda kupayona tsvakurudzo chokusika ruzivo idzva uye rwokugadzira. KAIST achava pamwe kunoshamisa tsvakurudzo nzvimbo muno muna Daedeok Industrial Park nedzimwe nzvimbo, uye rese nevamwe yose kusanganisira vaya vari Silicon Valley. High-ukoshi ruzivo pakusikwa kazhinji zvinoda nyika-kirasi zvivako uye rutsigiro rwakakwana. Tichaita zvose zvatinogona kuti tisimudzire kutsigirwa uye kuroorana kubva kuhurumende nemamwe masangano vaitungamirira.
Lecture dzimba mapurofesa 'pakutsvakurudza mumarabhoritari ndivo pamatsime itsva ruzivo zvisikwa. In mudzidzi zvakatinakira uye fakaroti-akatungamirira zvirongwa tsvakurudzo, chakaita zvakaoma- kushanda vadzidzi, zvose girajuweta uye Rokutenderwa, vanogona kubatsirwa zvikuru akasiyana uye nemamwe mikana. zvisinei, kwete Vanotsvakurudza zvose zvibereko muri maA vadzidzi. Ndinorangarira kunoshamisa mutsvakurudzi paUniversity of California, Berkeley pandaiva kudzidza mudzidzi. Kwaari tsvakurudzo kwainyanya kukosha, uye akapedza mazuva nousiku murabhoritari ichitungamirira kuedza. Iye angadai achiri panguva bhenji ake pakati pousiku, kunyange pakuongorora yavaizopiwa mangwana. Haana kuwana Sezvo vose, asi ruzivo zvakasikwa, akanga wechipiri hapana. Nokukurumidza pashure chikoro akatanga katyamadza nyika kuburikidza zhinji tsvakurudzo Zvinhu. KAIST anofanira kukoshesa uye kutsigira matarenda dzakadaro, zvikasadaro icho National kurasikirwa.
Interdisciplinary nokutsvakurudza zvichaita kukurudzira ubanguranyika pamusoro untraveled mundima anokosha akawanda anogona kuwanikwa. Mune imwe tsvakurudzo yunivhesiti, madhipatimendi nomumwe zvedzidzo vanofanira kuva nzvimbo changamire. Inogona kufananidzwa rinosvika akakwana kana bhora. zvisinei, kana zivo inosvika KAIST rinofanira kuzadzwa mabhora chete, ipapo 48% yose nzvimbo yaizoramba unfilled, inova nzvimbo kuongorora kuti pachaitika tsvakurudzo.
Interdisciplinary tsvakurudzo zvinoda fakaroti nhengo akasiyana kwomudzidzi madhipatimendi kunyatsotevera takabatirana nokutyora masvingo uye kukunda nechinouya. Akanyorwa pasuo hall Bell Labs, Murray Hill, New Jersey Dzidziso Alexander Graham Bell izvo anokumbira kushanyira unexplored mundima kuwana zvinhu zvitsva.
KAIST anofanira nguva dzose pave uye rutsigiro vatsvakurudzi kuita interdisciplinary tsvakurudzo zvirongwa panguva Kudya akadai KAIST Institute nevamwe nechivimbo uye nechido.
chepiri, "A" riri kufambira mberi pane fronts zvose. On January 30, Nara-Ho akanga zvinobudirira raparurwa kuti vakomberedze pose kuti aunganidze nekufambisa mashoko kwaizobatsira vanhu vose pasi pose. Uye kufanana Nara-Ho, KAIST vanofanira vomurova pacharo kuti yepamusorosoro kukwira kuti nyika yedu nzvimbo iri nani.
Kuti ave achitungamirira munyika yose sangano, KAIST anofanira kuita kwazviri kuwana pazvitsigiso zvakafanira zvose mutsika uye mari. nhengo dzose KAIST anofanira kuva kusingazununguki nechivimbo chokuti zvinhu zvose zvinogona kuitwa nani, kuti nzira itsva nzira dzinogona kuwanikwa uye kuti zvinhu zvinogona kuvandudza. Miitiro yakanaka inofanira kuvakwa uye vaiita unceasingly. KAIST vachawanawo nzira dzokuvandudza dzayo kunopindirana kunyatsoshanda.
KAIST anofanira kuwana nzira yokusimbisa collaborations pamwe Institute for Basic Science uye kutsvakurudza zhinji nzvimbo iri Daedeok Industrial Park. Zvinonyatsozivikanwa kuti kubudirira Silicon Valley ave inoshandisa dzidziso pamusoro kutsvakurudza uye dzidzo pedyo mumayunivhesiti akadai Stanford, Berkeley, uye San Jose State. Dean Frederick Terman weStanford University akakurudzirwa uye akabatsira William Hewlett uye David Packard kusika Hewlett-Packard Company.
The yemberi purani pamusoro KAIST anofanira remade mune zano zvose vomumatunhu dzayo uye Board vehomwe. Co-zvarinoroora ane purani yakadaro inogona kukosheswa, wakatsigira uye akaona pamwe zvizere chikamu vose.
Chechitatu, "Ini" anomirira Takavimbika. The Kuvimbika KAIST kuchaita nechiedzo nguva yakanaka pakati dzidziso uye tsika, rusununguko uye musimboti, kuvimbika uye Kushandirapamwe, uye kukosha uye chiito. Kuvimbika inofanira kukosheswa uye kwaiitwa zvose tsvakurudzo mabhuku, zvemari utariri, uye hwevanhu.
Makore anoverengeka akapfuura ndakapinda gungano remarudzi musangano Kosi Island, Girisi. Panguva rwendo urwu ndakadzidza zvakawanda pamusoro kuperera kuburikidza nyaya kunozivikanwa. Maererano nyaya, muvezi akanga arayira kuti pave bust kupemberera gamba anodiwa. Asi zvakanga achitora yakarebesa uye munhu aitarisira racho akashanyira nomuvezi uye akabvunza kuti sei chigadzirwa vasingagoni kukumikidzwa pakarepo. Kwaari akazviratidza kuitwa, asi nomuvezi akati aida nguva yakawanda kupedzisa nekunze kwaro. Nokuvhiringidzika mueni akabvunza kuti ndiani aizotarisira kuona nekunze kwaro. Mhinduro nomuvezi yaiva, "Mwari wangu airemekedzwa anoona nekunze kwaro."
Ndinotenda munhu kana sangano chavanopomerwa kutsungirira dzafumurwa nguva. Kuvimbika kunofanira kuva rokuita KAIST.
Chechina, "S" nokuda kuenderera. Dzidzo uye kutsvakurudza panguva KAIST pakupedzisira vanofanira kutsvaka chokwadi kutsigira. Research madingindira pachavo vanofanira kuva kutsigira uye tisingaiti rinosundwa nezvinangwa zvisingatori nguva. The EEWS Chirongwa yakanyorerwa dzakakosha pose Energy, mhepo mvura nenzvimbo, Water kuenderera. With kubudirira kutsvakurudza kuenderera-rinosundwa uye kukura, KAIST vachamuka kuva pamusoro-echelon yose mutungamiri mune zvesainzi. tsvakurudzo kuenderera-kutinhwa achaita anotumbuka pasi kurudziro uye kutsigira zvikuru. Kazhinji tsvakurudzo zvaitika vari kuyerwa kunoitwa indekisi Citation, asi hakukoshi ndiko kunotanga nechokwadi yowakaneta pachake nechokwadi uye chivimbo.
Ndinogona kutsanangura pfungwa iyi nokutaura mashoko muenzaniso Dr. Claude Shannon akaita tsvakurudzo pana AT&T Bell Labs uye gare gare akava purofesa with. Akabudisa zvishoma asi nerimwe remabhuku ake aiva chindori. Nanhasi, ake ruzivo dzidziso iri broadly kushandiswa. Tinofanira kutsigira KAIST kuti kutsigira mipiro zvakafanana caliber zhinji.
Fifthly, "T" nokuda Trust. KAIST anofanira kuva sangano riri kuvimbwa nehurumende, vanhu vayo, uye vabereki pavadzidzi. Kuvimba vakafunga sezvo zvinokosha sezvo zvakaoma mari.
Mutsika chivimbo ruvepo kunzwisisa uye kutarisira mumwe nomumwe ezvinhu. Trust achadzika midzi zvachose musi kembasi sechikamu KAIST tsika apo fakaroti, tsvimbo uye vadzidzi, nhengo dzose KAIST vemunharaunda, teerera uye kunzwisisa pfungwa zvakasiyana zvakawanda uye pfungwa evamwe uye kugoverana zvahuchaita nemumwe uye makorokoto vapachokwadi mumwe nomumwe. Uyezve, kana isu tizvitsaurire kuita pachedu nhengo yedu yenyika uye magariro kutozoedza mune zvesainzi nokudada uye nepfungwa basa, izvozvo vachawanazve uye kusimbisa chivimbo rudzi uye ruzhinji, uyewo nzanga, bata nokuti KAIST. On mikuru chikero, tinofanirawo kuva chevanorwara kuvimbwa anotsvakwa nevanhu mapurofesa zhinji uye vadzidzi kunze. With kuvimba kwakadaro yakasimbiswa, KAIST apedza uye vanhu Korea vanogona kuwana zvakawanda uye zvikuru mikana yose.
To muchidimbu, KAIST vanofanira kunoshamisa tichitarira ruzivo zvisikwa, simba mberi, kuvimbika, kuenderera uye chivimbo.
KAIST zvasvika munzvimbo yayo sechinhu yunivhesiti vakaziva munyika yose kuburikidza Kutsigira nomwoyo wose vanhu Korea. Ndinonzwisisa kuti kukweva KAIST kubatana nokudyidzana kuyunivhesiti nyika-kutungamirira vachishuva maererano nzanga kuburikidza kwechiropa kuchinja uye utsanzi ndiyo chete nzira kudzoka rudo uye kutsigirwa rwacho, rinova chaizvo basa ndakashevedzwa pamusoro kuita sezvo ndiri runotsaurirwa kupinda KAIST utungamiriri.
vanokudzwa vakakokwa, mhuri uye shamwari, Ndinoda Handimupinduri pane mumwezve panzvimbo inokosha chinhu ndisati vakakomberedza matauriro andaiita.
Last, asi kwete muduku, Ndinoda kuzokorokotedza kirasi 2017 nokuti kubudirira kwako. Iwe Akakunda kukwikwidzana kusvika KAIST, uye iwe wakashinga kuburikidza zvakaoma matambudziko kusvika pfungwa iyi. Kunyange ungave agonized asati aita chisarudzo chako kunyoresa pano, wamasarudza nokuchenjera. Nhengo dzose dzemhuri KAIST vachaita zvose zvavanokwanisa kuti vave nechokwadi kubudirira wauchazoroorana sezvo watama mberi masvingo izvi. musuo wangu nguva dzose zvikuru pachena kuti kushanyira, uye ini nguva dzose welcome uye kukoshesa mibvunzo yako, ndakacherechedza, mazano.
go totaura dzidzo uye nhungamiro zvavo, tapota iva nechokwadi chokuti KAIST mapurofesa uye rutsigiro vepachikoro ndivo pano kuti vadzidzi uye dzidzo yavo yakanakisisa.
kirasi 2017, anogona kubudirira kwenyu pane KAIST uye mhiri kuva magineti kukwezva zvikuru unyanzvi vokusekondari yedzidzo sayenzi mapurani. KAIST mapurofesa ndiwo basa renyu yokutevedzera uye inogona hwako-refu zvevapi vamazano uye varairidzi.
pachedu, kunyange pashure zvinopfuura 40 makore kubva kwangu kuChikoro Berkeley, mudzimai wangu uye ndinoenda kushanyira vadzidzisi angu Berkeley, Mapurofesa Leon Chua uye Ernest Kuh, kuti vanodya pamwe uye aikurukura pane zvakawanda muupenyu. Just ichi mwedzi, vakanga vachifara kunzwa wokutsaurira kwangu sezvo KAIST President uye akapa zvakanakisisa akashuva yangu itsva basa pana KAIST.
Dear vanokudzwa vakokwa, Ndinokutendai nokuti nhasi pano kuti kutanga chitsauko chitsva ichi KAIST. Ndinotenda nomwoyo wose uye kumbira kuti kutsigira kwako richaramba mberi KAIST uye kubatsirwa tose, rudzi rwedu, uye nyika.
President wenyika KAIST
Department of kwemasvomhu Sciences
Department of Medical Science uye Engineering
School of Mechanical, Aerospace uye Systems Engineering
Department of Industrial uye Systems Engineering
Department of Chemical uye BioMolecular Engineering
Department of Materials Science uye Engineering
Department of Zvenyukireya uye Quantum Engineering
Department of Information uye Communication Engineering
The Cho Chun Shik Graduate School kuti Green Transportation
Graduate School of EEWS (simba, mhepo mvura nenzvimbo, Mvura, kuenderera)
College of Liberal Arts uye Convergence Science
Department of Humanities uye Social Sciences
Department of Business uye Technology Management
The institute rakaumbwa 1971 sezvo Korea Advanced Institute of Science (Kais) ne chikwereti US $ 6 miriyoni (US $ 34 miriyoni 2014) kubva kuUnited States Agency for International Development (USAID) uye vachitsigirwa President Park Chung-Hee[ The Institute zvedzidzo zano rakanga vainyanya yakagadzirwa ne Frederick E. Terman, mutevedzeri womutungamiriri Stanford University, uye Chung Geun-mo,, purofesa panguva Polytechnic kwo Brooklyn. The Institute huru mbiri mabasa vaifanira kudzidzisa mazhinji masayendisiti uye mainjiniya uye kukudziridza maumbirwo dzidzo akapedza munyika. Research zvidzidzo akatanga 1973 uye undergraduates vakadzidza kuti tsvimborume kuti madhigirii kubudikidza 1984.
mu 1981 hurumende akabatanidza yeKorea Advanced Institute of Science uye Korean Institute of Science and Technology (KIST) kuumba Korea Advanced Institute of Science and Technology, kana KAIST. Nokuda kwemaonero zvokutsvakurudza uzivi, KIST uye KAIST rwakakamukana mu 1989. Mugore iroro KAIST uye Korea Institute of Technology (Kit) aibatanidza uye vakabva Seoul kusvika Daedeok Science Town inDaejeon. Chiito chokutanga President Suh pamusoro wokutsaurira wake July 2006 kwaiva kuisa kunze KAIST Development Plan. The 'KAIST Development Five-Year Plan' akanga kunyorwa kwenyaya musi February 5, 2007 kubudikidza KAIST gozvo Committee. Kuzvinangwa KAIST wakaratidzwa Suh vaifanira kuva mumwe yakanakisisa mumayunivhesiti zvesainzi munyika, uye kuti ave mumwe kumusoro-10 mumayunivhesiti kubudikidza 2011. In January 2008, yunivhesiti akadonha zita raro rizere, Korea Advanced Institute of Science and Technology, akashandura zita rayo pamutemo kuti chete KAIST.
Unoda kurukura KAIST ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
KAIST musi Map
Photos: KAIST pamutemo Facebook
Join kukurukura pamusoro KAIST.